“भुवन काकालाई १० करोडको छेती दिनु पर्‍यो अरे ” भन्ने को युवती हो ? आयो नयाँ कुरा (भिडियो हेर्नुस्) « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
“भुवन काकालाई १० करोडको छेती दिनु पर्‍यो अरे ” भन्ने को युवती हो ? आयो नयाँ कुरा (भिडियो हेर्नुस्)
भुवन केसि र साम्राज्ञी बिचको झगडा सामाजिक सन्जाल हुँदै अदालत सम्म पुगेको छ । सम्राज्ञीले सामाजिक सन्जाल तताए पछी भुवन ले बोल्न बाध्य भए तर सम्राज्ञीले कसैको पनि नाम लिएकी थिइनन भुवन आफै मालाई नै भनेको सोचेर प्रतिकृया दिए अनि अदालत सम्म पुराए त्यो पनि १० करोडको छेती पुर्ती माग गर्दै । यो बिबादले कलाकार पनि दुई भागमा बाँडिएका छन् । कती भुवनको लागी बोल्दै हिडे भने कतिले साम्राज्ञीलाई साथ दिए ।
यस्तैमा एक नायीकाले साम्राज्ञीलाई साथ दिदै अलि कडा अभिब्यक्ति सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले भुवनले अदालतमा साम्राज्ञी विरुद्ध दिएको उजुरिका विषयमा समाचार बाहिरिए पछि त्यसमा प्रतिकृया दिँदै उग्र अभिब्यक्ति दिएकी हुन । नायिका दिपशिखा खड्काले साम्राज्ञीको पक्षमा बोल्दै भनिन यो त अत्ती भो । भिडियो हेर्नुस्